plugins | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Red Giant Trapcode Particular 2.2 | 124.20 MB
Host Applications: Adobe After Effects CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5
Home Page : http://www.redgiant.com/products/trapcode-particular/
ကဏ္ဍ Photo-Shop, plugins
Alien Skin Exposure v6.0.0.1110 Full With Keygen
Alien Skin Exposure v6.0.0.1110 | 116.2 MB
ပုံတွေ ပြင်ဆင်ချင် သူတွေ၊ Photoshop ကလိသူတွေ အတွက်တော့ ဒါလေး ကလည်း အံ့မခန်း ကူညီပေးပါ
အုံးမယ်..။ ပုံတပုံ လိုချင်တဲ့ အနေအထား ရောက်အောင် အလွယ် တကူ ဖန်တီးဖို့ ဒီ Plugin လေးကို အသုံး
သူကို သုံးနိုင်ဖို့ Photoshop CS5, Photoshop Elements 10, Photoshop Lightroom4အဲဒါတွေတော့
မိမိစက်မှာ သွင်းထားဖို့ လိုပါတယ်..။ စမ်းကြည့်လိုက်ကြ ပါဦးဗျာ..။
DOWNLOAD Alien Skin Exposure Trial
▼ usersfiles ▼ (OR) ▼ tusfiles ▼
Adobe Flash Player 14.0.0.179 / 14.0.0.176 IE Final Full Free Download
Adobe Flash Player 14.0.0.179 / 14.0.0.176 IE Final | 35.84 MB
Adobe Flash Player -afree, widely used media player to view the file format Flash (files SWF).Flash has foralong enough period of time is an indispensable tool for creating presentations, games, websites, animations, and other add-ons that require rich multimedia content.
* Protected Mode for Firefox – Flash Player Protected Mode isanew security enhancement designed to limit the impact of attacks launched from malicious SWF files against Adobe Flash Player when running in Firefox 4.0 + on Windows Vista and higher.
This feature is comparable to the Flash Player Protected Mode in Google Chrome browser, Protected Mode in Adobe Reader, and Office 2010 Protected View.
ကဏ္ဍ Player, plugins
Color Efex Pro Version 4.0.1 With Crack full Version
ဓာတ်ပုံ လုပ်ငန်း သမား တွေ အ တွက် နဲ့ အပျော် တန်း ဝါသနာ ရှင် များ အတွက် လိုအပ် မယ် ထင် လို့ တင်ပေး လိုက် ပါတယ်။ Photo တွေ Color အလန်း လေး လုပ်ချင် သူများ အတွက် အရမ်း အသုံးဝင် တဲ့ ဆော့ဝဲ ကောင်းလေး တစ်ခု ပါဘဲ။
Full ဖြစ်စေ ဘို့ အတွက် ကတော့ Crack ဖိုင် လေးကို ထည့်ပေး လိုက် ပါတယ်။
ဆော့ဝဲရှိပြီး Active မဖြစ်သေးတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ အောက်ကကီးကို အသုံးပြုကြည့်ပါ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, August 02, 20142comments:
ကဏ္ဍ Photo Software, Photo-Shop, plugins
Adobe Muse CC 7.3 Build5Multilanguage
ဒီကောင်လေး ကတော့ Adobe tools တွေ အသုံးပြု ပြီး websites ဒီဇိုင်းတွေ ရေး ဆွဲနိုင်သည့် အပြင်
backup and sharing တွေပြု လုပ်နိုင်ပြီး cloud storage ကနေ 20GB အသုံးပြုနိုင်သည့် အပြင် မိမိ
၀က်ဆိုဒ် ကို add custom navigation, slide shows, contact forms နဲ့ add Facebook "Like"
and Twitter "Follow" buttons တွေက အစရေးဆွဲနိုင် ပါတယ်။
background images, slide shows, နှင့် HTML or FTP host တွေက အစ uploading ပြုလုပ်နိုင် ပါ
နောက်ထပ် လုပ်ဆောင်ချက် အများကြီးပါ အောက်မှာ ဆက်ပြီး လေ့လာ လိုက်ပါ။
What is new in version 7.3 build 5
-Periodic crash when using YouTube widgets. Design & Preview mode within Muse now showaYouTube logo asatemporary placeholder. The correct YouTube video will be used for Export, FTP, and Publish.
-Some types of site content cause Muse to incorrectly Publish all pages and not just the pages that were changed.
-Accordion widgets with “Overlap Items Below” enabled could prevent links below the accordion from being clickable.
ကဏ္ဍ Photo-Shop, plugins, Tools
ဒီကောင်လေး ကတော့ Adobe Photoshop နဲ့ တွဲဘက်ပြီး အသုံးပြုတဲ့ plug-ins ပါပဲ။ ဒီ plug-ins လေးကို
သုံးပြီး မိမိပုံတွေကို ခဲပန်းချီ ပုံစံမျိုး ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ကာလာ အရောင် မိမိကြိုက်သလို ထည့်သွင်းဖန်တီး
နိုင်ပါတယ်။ lead pencil, ink-pencil, crayon, charcoal, airbrush, တို့ကိုဖန်တီးနိုင်သလို water paper,
squared paper, laid paper, canvas, leather, crepe, rag paper စသည့်ပုံစံတွေဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
ဖိုင်ထဲမှာ များစွာသော plug-ins တွေကို ထည့်သွင်းပေး ထားပါတယ်။ မိမိ ကြိုက်ရာ ခေါ်ယူ အသုံးပြုပါ။
3D surfaces. Cosmic curves, melted metal, drapes, flowers, jewelry, surreal streamlined
pictures စသည့် effects တွေအပြင် patterns တွေကိုလည်း ထည့်သွင်းပေး ထားပါတယ်။
Redfield Plugins collection - it isacomplete set of plug-ins for Adobe Photoshop, produced ​​by the company 2007 - 2014. It includes plug-ins for x86 / x64. Redfield Plugins offersafamily of plug-ins that meet the needs ofadiverse spectrum of designers and digital photographers. There are great new plugins included,
Plugins included in this collection;
Plasteroid Photoshop Filter isaprecision tool for texturization of plain pictures as well as making impressive photo-frames. You can imitate any surface you wish, all you need is an appropriate texture. The Plasteroid plugin is compatible with Texturation 3D
Water Ripples Photoshop Filter - This plug-in is very effective in producing highly realistic water ripples. The random settings generator produces unlimited variations of quality 3D rippled surfaces
* Windows 2000/XP/Vista/7 32/64-bit
* Adobe Photoshop compatible Image Editor 32/64 bit
(For the plugins - ATX 1.25, Fractalius 1.83, iEmboss 1.50, Perfectum 2.01, SketchMaster 3.35, Umatrix 1.85, Face Control 2.0)
* Adobe Photoshop compatible Image Editor 32 bit (For all the rest)
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, May 07, 2014 1 comment:
ဒီကောင်လေး ကတော့ Vegas Pro နဲ့ Movie Studio တွေနဲ့ တွဲဘက် သုံးလို့ ရတဲ့ video plugins software
ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Chroma Key Pro, Color Replace, Cut Away, Garbage Matte, Picture Grid, Picture-in
-Shape, အစ ရှိတဲ့ efficient tools ပေါင်း 100 ကျော် ပါဝင်ပါတယ်။
video wall တွေ color တွေကို မိမိ ကြိုက်သလို ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ professional effects ပေါင်း များစွာ
ပါဝင်တဲ့ Video Essentials VI ကို သူငယ်ချင်းတို့ သုံး ကြည့်ကြပါ။
Full ဖြစ်စေဖို့အတွက် Keygen ကိုအသုံးပြုပါ။
NewBlue Video Essentials VI is the latest in the best-selling Essentials line-up of must have
video plugins for Vegas Pro and Movie Studio software.
Vegas users can create complex visual stories with plugins like Picture Grid, Chroma Key Pro, and Cut Away.
Get professional results with over 100 presets in 10 incredibly efficient tools. Complete collection includes Chroma Key Pro, Color Replace, Cut Away, Garbage Matte, Picture Grid, Picture-in-Shape, Saturation EQ, Saturation Modifier, Selective Touch Up and Tile.
The best-selling Video Essentials, offers 100 presets in 10 incredibly sophisticated plugins.
Using Video Essentials VI, you can effortlessly call attention toaparticular section of your
footage, remove subtle imperfections while retaining strong detail, align multi-track picture-
in-pictures, replicate your footage intoavideo wall, or instantly replace one color for
another. Achieve these professional effects and more with ease using Video Essentials VI.
ကဏ္ဍ plugins, Video-software
HitFilm Plugins 1.0 for AE
ဒီကောင်လေး ကတော့ Adobe After Effects CS6 & CC တို့နှင့် တွဲဘက် အသုံးပြုနိုင်သော HitFilm
130 ကျော် plugins တွေ ပါဝင်ပြီး မိမိကြိုက်ရာကို ခေါ်ယူ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
မိမိပြုလုပ် ထားသော ဒီဇိုင်းတွေကို အခုလို Plugins တွေနဲ့ တွဲဖက် အသုံးပြုပြီး အသက်ဝင်လှတဲ့ ပုံတွေ
ကိုရေး ဆွဲနိုင်မှာပါ။ ဒီကောင်လေး ကိုတော့ Microsoft Windows 8 (64-bit), Microsoft Windows 7
(64-bit) တွေမှာသာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အင်စတော လုပ်နည်းကိုဒေါင်းလော့စ်ဖိုင်ထဲမှာ ပုံတွေထည့်ပေး ထားပါတယ်။
HitFilm technology - HitFilm effects are available for the first time as plugins, GPU-accelerated and optimized for high performance and professional rendering quality.
Over 130 plugins - This versatile collection ranges from visual effects and green screen compositing to motion graphics and color grading. There's something for every project.
-NVIDIA GeForce9Series
-Radeon HD 5000 series
Homepage : http://hitfilm.com/plugins
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, April 28, 2014 No comments:
Photoshop သမားများ အတွက် ရှိထား ရမယ့် Plug - in တစ်ခု Noiseware Plug-in 5.0.0.7 Full
Photoshop ဟာ ဓါတ်ပုံ သမားတွေ အတွက် အဓိက သုံးစွဲနေတဲ့ Software တစ်ခုပါ။
ကျွမ်းကျင်ရင် ကျွမ်းကျင် သလို ကောင်းမွန် ပြည့်စုံတဲ့ အရည် အသွေးမြင့် ဓါတ်ပုံနဲ့ ဒီဇိုင်းတွေ ဖန်တီး
နိုင်ပါတယ်.. မကျွမ်းကျင် သူများ အတွက်ကတော့ လွယ်ကူ သက်သာဖို့ အတွက် Plug-in တွေဟာ
Noise ware Plugin v5.0.0.7 Full Version က ဓါတ်ပုံရဲ့ ရုပ်ထွက် ကောင်းမွန်မှုနဲ့ ကြည်လင် ပြတ်
သားမှု၊ စိုပြည် တောက်ပမှု တို့ အတွက် အထောက် အကူ ပြုပါတယ်...။
Install လုပ်နည်း ကတော့ ဒီကောင်ကို Photoshop>plugin ထဲကို ညွှန်းပေး ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်...။
Full version ဖြစ်ဖို့ အတွက် ဒီကောင်ကို Install လုပ်ပြီးရင် Photoshop ကို ဖွင့်လိုက်ပါ...။
ပြီးရင် ဓါတ်ပုံ တစ်ပုံလောက် ဖွင့်လိုက်ပါ... Menu bar ထဲက Filter>Imagenomic>Noiseware
ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ကီးတောင်းရင် ပါလာတဲ့ ကီးကို ဖြည့်ပေး လိုက်ပါ... အင်တာနက် ပိတ်ထားဖို့ လိုပါမယ်။
ဒီလောက် ဆိုရင် အဆင်ပြေ လောက် ပါတယ်ဗျာ
ကြိုက်နှစ်သက်တယ် ဆိုရင်အောက်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
ပိုတိုရှော့ အတွက် အသင့်လုပ်ပြီး မင်္ဂလာစုံတွဲ PSD 16.2Mb
ကျွန်တော် ဒီတခါတော့ ပိုတိုရှော့ တွက် မင်္ဂလာစုံတွဲ စတိုင်ပုံလေး တစ်ပုံကို တင်ပေးလိုက်
ဒီပုံလေးကို ဘလော့ခရီးသည် ဆိုဒ်မှာတွေ့လို့ သူငယ်ချင်းတို့ ထဲမှ လိုအပ်သူများ ရှိမယ်ထင်
တာကြောင့် ကူးယူမျှဝေ လိုက်ပါတယ်။
ပိုတိုရှော့ ပုံတွေကို ပိုတိုရှော့ အတွက် မင်္ဂလာစုံတွဲ စတိုင် လေးကို ရယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့
အောက်မှာ ဒေါင်းလုပ်လင့် နှစ်ခု ပေးထားပါတယ်
မိမိတို့ ကြိုက်ရာလင့်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
ကဏ္ဍ Photo-Shop, plugins, PSD
ပိုတိုရှော့ အတွက် အသင့်လုပ်ပြီး PSD (8.8MB)
ကျွန်တော် ဒီတခါတော့ ပိုတိုရှော့ တွက် ယောင်္ကျားလေး ဆိုင်ကယ်မောင်း နေတဲ့ စတိုင်ပုံ
ဒီပုံလေးကို ဘလော့ခရီးသည် ဆိုဒ်မှာတွေ့လို့ သူငယ်ချင်းတို့ ထဲမှ လိုအပ်သူများရှိမယ်ထင်
ပိုတိုရှော့ ပုံတွေကို ပိုတိုရှော့ အတွက် ဆိုင်ကယ်မောင်းနေတဲ့ စတိုင်းလေးကို ရယူချင်တယ်
ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းလုပ်လင့် နှစ်ခု ပေးထားပါတယ်
StartIsBack Plus 1.5.2 Final Multilingual Full
StartIsBack Plus 1.5.2 Final Multilingual | 1.05 MB
StartIsBack returns to full-featured Windows 8 start button Start menu, the same as in Windows . StartIsBack significantly improves the usability of the desktop and makeanew screen in an orderly, more convenient, fast and stable.
Download StartIsBack Plus 1.5.2 Final Multilingual ( 1.05 MB )
Download StartIsBack Plus
ကဏ္ဍ plugins, Window
Alien Skin (Photoshop Plug-ins) Bundle Dec, 2013
Blow Up and Bokeh are plug-ins and requireahost application. Exposure and Snap Art work as standalone applications and plug-ins.
They will all work with the hosts listed below.
solidfiles filecloud tusfiles
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, December 05, 2013 No comments:
ဒီကောင်လေးကတော့ Adobe After Effects နဲ့ Premiere Pro တွေမှာ တွဲသုံးရတဲ့ Plugin လေးပါ။
update လေးတွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 40 MB ကျော်ပါတယ်။
Alien Skin Blow Up 3.0.0.691 Revision 24190 Plugin for Adobe Photoshop (x86/x64) Full
Alien Skin Blow Up 3.0.0.691 Revision 24190 Plugin for Adobe Photoshop (x86/x64) | 50.8 MB
ဒါလေးကတော့ Photoshop အသုံးပြုသူတွေ အတွက် အရမ်းကောင်းတဲ့ Plugin လေးပါ။
update လေးတွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ keygen နဲ့ Patch ပါထည့်ပေးထားပါတယ်။
ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 50 MB ကျော်ရှိပါတယ်။
Wedding Dress ( for PhotoShop)
ဒီ File လေးကတော့ PhotoShop မိတ်ဆွေများ နှစ်သက်ကြမယ့် အသင့်လုပ်ပြီး ဝတ်စုံများ ထဲမှ
အမျိုးသမီးများ အတွက် မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ ဝတ်စုံလေးပါ။
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တွေ့လို့ သူငယ်ချင်းတို့ အတွက် ဆွဲလာခဲ့တာပါ၊ ကိုလင်းကမ္ဘာ ရဲ့ မင်္ဂလာ ၀တ်စုံ
အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင် ပါတယ်နော်...။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, October 25, 2013 No comments:
Photoshop သမားများ အတွက် အသင့်သုံးရန် ဘွဲ့ ဝတ်စုံ လေးများ
ဖိုတိုရှော့ သမားများ အတွက် ဘွဲ့ ဝတ်စုံလေးတွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
တင်ပေးသမျှ ဖိုတိုရှော့နှင့် အသုံးတည့် တာလေးတွေကို တော့ စုစည်း သိမ်းထားစေချင်ပါသည်။
မိမိ ကိုယ်တိုင်လုပ်တတ်ရင်တော့ သိပ်မခက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒါလေးတွေက တစ်ခါတစ်လေ အလွယ် ယူသုံးလို့ ရပါတယ်။
▼ userscloud.com ▼ OR ▼ solidfiles.com ▼
မျှဝေသူ Unknown မှာ Wednesday, August 14, 20133comments:
Topaz Photoshop Plugins Bundle (20.06.2013)
Topaz photoFXlab v1.2.6 Datecode 20.06.2013
Topaz Simplify v4.0.1 Datecode 20.06.2013
Topaz Detail v3.1.0 Datecode 20.06.2013
Topaz Clean v3.0.2 Datecode 20.06.2013
Topaz DeNoise v5.0.1 Datecode 20.06.2013
Topaz InFocus v1.0 Datecode 20.06.2013
Topaz Lens Effects v1.2.0 Datecode 20.06.2013
Topaz Adjust v5.0.1 Datecode 20.06.2013
Topaz ReMask v3.2.1 Datecode 20.06.2013
Topaz B&W Effects v2.1 Datecode 20.06.2013
Powerful Zone System Viewing Mode
Create dynamic and high-contrast black and white photography with the help of the new Zone System in Topaz B&W Effects.
The Zone System isaphotographic technique to determine optimal image exposure where your image is separated into 11 "zones" of brightness. It'saproven system that has historically helped photographers develop excellent black and white photos.
Pixel-Perfect B&W Conversions
Develop your own personal masterpieces with our uniquely powerful technology.
Integrated Local Adjustments
Make your art different. Give different parts of your image their own unique treatments by applying anything from subtle localized adjustments to large-scale creative color isolation.
Download links [ rapidgator ][ bitshare ][ Download from uploaded ][ turbobit ]
Photoshop သမားများအတွက် မရှိမဖြစ် Plugin
Adobe Photoshop နဲ့ တွဲပြီး သုံးမယ့် Plugin လေးတစ်ခု ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
Norseware Plugin လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ..။ ဗာရှင်းကတော့ 5.0.0.7 ဖြစ်ပါတယ်။
Original ကီးလေးပါ ရှာပြီး ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘာအတွက် အသုံးပြုလဲဆိုတော့ ကိုယ်ပြင်လိုသော ပုံက Noise များနေတာမျိုးကို လျှော့ချပေးပြီး ပုံကို ကြည်လင်ပြတ်သားစေပါတယ်…။
ကျနော် ကိုယ်တိုင် သုံးနေတာမို့ ကောင်းတယ် လို့တော့ အာမခံလိုက်ပါတယ်။ Photoshop သမားတိုင်း ဆောင်ထားသင့်သော Plugin လေးဖြစ်ပါတယ်။
အရင်ဆုံး Plupin လေးကို Install လုပ်လိုက်ပါ… Install လုပ်တာပြီးသွားရင်တော့….
Adobe PS ထဲကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
Full version လေးဖြစ်အောင် ကီးထည့်မယ်ဗျာ
Adobe PS CS ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
Adobe PS CS ၏ File Menu ထဲမှ Open နဲ့ ပုံတစ်ပုံကို ယူလိုက်ပါ။
Menu ထဲမှ Filter ဆိုတဲ့ Tab လေးကို သွားပါ။အောက်မှာ ပုံလေးပြထားပါတယ်။
အဲမှာ Imagenomic ဆိုတဲ့ လေးကို PS ထဲမှာ Noiseware ဆိုတာလေးကို ကလစ်လိုက်ပါ...။ ကီးတောင်းလာပါလိမ့်မယ်...။
မတောင်းဘူးဆိုရင်တော့ about ထဲကိုဝင်ပြီး Register ဆိုတာလေးကို နှိုက်ပြီး download ဖိုင်ထဲမှာ ပါတဲ့ key လေးကို ထည့်လိုက်ပါ။
ကဲ ဖူးဗားရျင်းလေးသုံးလို့ ရပါပြီ...။
ကဲဗျာ သုံးတာလေးကို တော့ လွယ်လွယ်လေး....
မကြည်လင်မပြတ်သားတဲ့ပုံတွေကို .... ကလစ်လေးတစ်ချက် နှိုက်ပေးလိုက်တာနဲ့ OK သွားတယ်..။
အောက်မှာ ကြည့်နော် .... ဘာကွာလဲဆိုတာ...။
A monitor with 1280x800
Adobe Photoshop CS နှင့် အထက်
မျှဝေသူ Unknown မှာ Friday, June 07, 2013